Besca Wire harato
Besca Cable lovia
BC3 tohatra lovia
Bc4 tohatra lovia
Wire harato Cable lovia
U Fittings sy Base
Fisaka Plate Fittings
Oil & Gas ambany
Miara-miasa amin'ny BC3 / Bc4 Cable lovia
Aluminum Strut, Cable Trays sy tohatra
BC1 / 2/5/6 Cable lovia
BC3 Cable lovia (H = 50)
Bc4 Cable lovia (H = 50)
BL1 / 2/3 Steel Cable tohatra
Nema 12b / 16a / 20b / 20C Steel Cable tohatra
Marina Cable tohatra
Nema 20C / BL4 Cable tohatra Aluminum
Cover Cable tohatra
BL5 / 6 FRP Cable tohatra
BM1 / 2/3 Wire harato Cable lovia
BM4 / 5/6 Wire harato Cable lovia
Insert Concrete Channel
Etona & Pressure Vessel Steel
Low firaka High Strength Steel
High Hery & fikirizana Steel
Marokoroko sy Resistance Steel
Oil & Gas-dalana, Steel
amin'ny https: // www.bescatray.com (manomboka izao, dia ho antsoina ho bescatray.com), mpitsidika fiainana manokana dia ny dehibe. Zavatra tsy politika fiainana manokana pejy mamaritra inona no mety ho mombamomba nandray sy nangonin'ny bescatray.com sy ny vaovao no ampiasaina.
Araka ny matihanina maro hafa toerana, bescatray.com vola amin'ny aterineto dokambarotra. Ny mpiara-miombon'antoka dia ahitana Bing ambarao Ads (Yahoo Ads). Mba hahabetsaka dokam-barotra anaty aterineto ROI sy ny ampinga lehibe hahita mpanjifa, bescatray.com nampihatra ny sasany kaody ampy niteraka 'ireo fikarohana ny firaketana an-tsoratra sy ny mpampiasa IPS pejy mijery tsy fampindramam.
isika hanangona ny raharaha rehetra fifandraisana rakitra naniraka tany amin'ny mailaka na ny Internet tsy ampy amin'ny bescatray.com avy amin'ny mpitsidika. Ny vahiny famantarana sy ny antontan-kevitra mifandray fifandraisana niditra dia hotehirizina ho an'ny bescatray.com fotsiny ny fampiasana anatiny. bescatray.com ho antoka ny fiarovana sy ny fampiasana araka ny tokony ireo tahirin-kevitra.
Ho manokana ihany no mampiasa ny vaovao fantatra araka ny voalaza eto ambany, raha tsy efa mazava nanaiky hafa karazana fampiasana, na tamin 'ny fotoana ny vaovao fantatra manokana dia nangonina avy aminao, na amin'ny alalan'ny zavatra hafa avy amin'ny teny fanekena aminareo:
1.We dia hampiasa manokana vaovao fantatra mba hamita izay baiko efa napetraka.
2.We fantatra dia hampiasa manokana mba hanome fanazavana anao amin'ny asa manokana izay efa nangatahana, toy ny tonga ny Retailer.
3.We dia hampiasa ny vaovao fantatra mihitsy ny hamaly ny fanontaniana no maniraka antsika.
4.We dia hampiasa ny vaovao fantatra mihitsy no handefa anareo mailaka ombieny ombieny, toy ny Newsletters sy ny manamarika momba ny fisondrotana.
5.We manokana dia mety hamoaka vaovao fantatra araka ny takian'ny lalàna na ny dingana ara-dalàna.
6.We Mety hamoaka fanazavana fantatra manokana hanadihady ahiahiana hosoka, herisetra na zavatra hafa misy fandikana ny lalàna, na ny fitsipika hitondra, na ny teny na ny politika ho amin'ny Internet.
Hiala / fanitsiana
Rehefa ny fangatahanao, isika, dia (a) marina na ny vaovao farany ny vaovao manokana, (b) intsony mandefa mailaka amin'ny adiresy mailaka; ary / na (c) hanafoana ny kaonty hisorohana izay fividianana hoavy amin'ny alalan'ny tantara izany. Azonao atao ny manao fangatahana izany amin'ny fizarana ny mpanjifa vaovao, na amin'ny telefaonina, na emailing ny fangatahanao bescatray.com ny Customer Support departemanta amin'ny candy@bescatray.com. Aza mailaka ny carte de crédit maro na vaovao saro-pady hafa.